မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကတော့ Ninjastrikers ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက သင်ဟာ အကြောင်းအရာများကို လုံလောက်စွာ ရှင်းပြခြင်း မရှိဘဲ ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ နောင်အခါ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ သင်ပြုလုပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုများမှာ လုံလောက်တဲ့ တည်းဖြတ်ခြင်း အတိုချုပ်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ရင် အခြားသူတွေအတွက် အကူအညီဖြစ်မှာပါ။ ဒါဟာ မှားယွင်းပြုလုပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုရင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြီးပါပြီ။ စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် sandbox ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ် အမှားပြုလုပ်မိတယ်လို့ သင်ယူဆခဲ့ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် မေးမြန်းစရာရှိတယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ စာတိုချန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၂:၅၉၊ ၁၃ မေ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Yes, I'm sorry. I'm just trying to translate this page with English. YouthI Technology(YouthIT) (ဆွေးနွေး) ၀၃:၀၆၊ ၁၃ မေ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
wikiစာမျက်နှာပေါ်တွင် မိမိ edit စရာရှိပါက မလုပ်တတ်ရင် ကူညီပေးပါတယ်။ YouthI Technology(YouthIT) (ဆွေးနွေး) ၀၅:၂၇၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
wikipedia ပေါ်တွင်မရှိသေးသော် စာမျက်နှာ ကို ဖန်တီးရန်။ Create New Page In Wikipedia. YouthI Technology(YouthIT) (ဆွေးနွေး) ၀၅:၃၀၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မိမိဆွေးနွေးလိုနဲ့အကြောင်းရာကိုရေးပါ။ YouthI Technology(YouthIT) (ဆွေးနွေး) ၀၅:၃၀၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မိမိ ကူညီလိုသည့် အကြောင်းရာ ကိုရေးပါ။ YouthI Technology(YouthIT) (ဆွေးနွေး) ၀၅:၃၁၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ မကြာမီက သင်ဖန်တီးလိုက်သော စာမျက်နှာ ဟာ စာမျက်နှာသစ်များအတွက် ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အချို့နဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက် (မဖယ်ရှားရသေးပါက) မကြာမီအတွင်း ဖယ်ရှားခြင်း ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ စမ်းသပ်မှုများကို sandbox မှာ ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဆောင်းပါးများ ဖန်တီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် သင်၏ ပထမဆုံး ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တည်းဖြတ်ရေးသားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မိတ်ဆက် စာမျက်နှာကိုလည်း ဖတ်ရှုပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၀၁၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
YouthI Technology(YouthIT) (ဆွေးနွေး)  ၁၄:၅၀၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အသုံးပြုသူစာမျက်နှာများ အပါအဝင် အသုံးပြုသူအမည်များ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ကဏ္ဍများ၊ ဖိုင်များ၊ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာများ၊ တမ်းပလိတ်များ စတဲ့ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကြော်ငြာခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းများကို ခွင့်မပြုပါ။ အသေးစိတ်ကို WP:NOTPROMO မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၈:၁၇၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]